(tonga teto avy amin'ny Kôntinanta Amerikana)
Ny mponina tonga voalohany tao Amerika, izay antsoina hoe "Teratanin'i Amerika" na Amerindianina dia miisa eo amin'ny dimampolo tapitrisa eo ho eo. Izany hoe mahery kelin'ny 5% ny isan'ny mponina manontolo. Ny teny tenenina indrindra ao Amerika dia teny eoropeanina avokoa. Ny fiteny amerindianina be mpiteny indrindra dia ny fiteny ketsoà (frantsay / anglisy / espaniola: quechua) izay arahin'ny fiteny nahoatla.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerika&oldid=999870"
Dernière modification le 4 Janoary 2021, à 14:15
Voaova farany tamin'ny 4 Janoary 2021 amin'ny 14:15 ity pejy ity.